Soomaaliya oo laga xusay maalinta nabadda iyo cayaaraha. Munaasabad aad u balaaran oo lagu xusayay Maalinta dunida looga dabaaldego isticmaalka cayaaraha ee nabadaynta dunida iyo maalin looogu magac daray maalinta cayaartoyda Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacday garoonka Banaadir ee magaalada Mogadishu. Read More...
Kooxda I.L.S oo si xarago leh ugu guulaysatay koobka Jen.Daa’uud.
Kooxaha kubada kolayga I.L.S iyo Heegan ayaa galabta ku kulmay Garoonka Wiish kulanki ugu dambeeyay koobka kubadda kolayga Jen.Daa’uud, waxaana ciyaartan u soo daawasho tagay Masuuliyiin ka soctay wasaarada dhalinyarada iyo isboortiga, guddiga Olombiakda Soomaaliyeed, Madax ka soctay xiriirada, ciyraatoy hore iyo taageerayaasha labada koox oo si wayn u soo camiray garoonka.
Guddiga fulinta GOS oo kulankoodii labaad ee 2015 ka ku qabtay Mogadishu. Shirka guddiga Fulinta oo ay ka soo qayb galeen xubnaha guddiga fullinta iyo guddoomiye Sharafeedaka GOS Cabduqaadir Gacal Abkoow ayaa waxaa shir guddoominayay Guddoomiyaha GOS Cabdullaahi Axmed Tarabi.
Arsenal oo farasaartay Liverpool kaalinta labaadna si ku meelgaar ah ugu jirta.
Kulan si aad ah loo sugayey maanta kana tirsanaa horyaalka dalka Ingiriiska ayey kooxda reer waqooyiga London ee Arsenal 4-1 ku quusisay kooxda Liverpool guushaasina waxa ay si ku meelgaar ah salka u dhigtay kaalinta labaad ee horyaalka.
Dekedda oo u awod sheegatay Horseed.
Kooxaha kubadda cagta Dekedda iyo Horseed ayaa shalay galab ku kulmay garoonka Banaadir kulan ka tirsan horyaalka kubada cagta dalka Nationlink Championship 2014-15.
Wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha oo kormeeray garoomada Mogadishu.
Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dowlada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux oo ay wehliyeen guddoomiyaha GOS, guddoomiyayaal xiriiro iyo xubno ka tirsan GOS iyo Xiriirka kubada cagta ayaa manta kormeer uu ugu kuurgalayo garoomada cayaaraha ku soo maray garoomo kala duwan. Read More...
Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya oo la kulmay madaxda sport ga dalka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari ayaa kulan qado sharaf ah manta ku casuumay Bahda isboortiga dalka, oo isugu jiraty masuuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga, Guddiga Olombikada Soomaaliyeed, Madaxa xiriirada, Xildhibaano iyo waliba qaar ka mid ah masuuliyiintii, macalimiintii, ciyaartoydii iyo Garsoorayaashii hore ee dalka.
Dekedda oo guul muhiim ah ka gaartay Elman+Sawirro
Kooxda kuubada cagta ee Dekedda ayaa 2-0 kaga adkaatay kooxda Elman kulan ka tirsan horyaalka kubadda cagta dalka (Nationlink Championship 2014-15).
Gabdhaha Horseed oo isku darsaday koobka Jen.Daa’uud iyo koobka Maalinta Qaaxada Caalamka+Sawirro
Gabdhaha kubadda kolayga Horseed iyo Heegan ayaa galabta ku kulmay kulanki sedexeed ee koobka kubadda kolayga Jen.Daa’uud isla markaana ay ku koolamayeen koobka Maaliinta Qaaxada Aduunka.
Gaadiidka oo guul ka gaaray Banaadir SC xili guduudkii ugu badnaa horyaalka La bixiyay + Sawirro
Kooxda kubada cagta Gaadiidka ayaa 2-1 kaga adkaatay kooxda Banaadir Sports Club kulan ka tirsanaa horyaalka kubadda cagta dalka soomaaliya (Nationlink Championship 2014-15).
Page 12 of 16First Previous 7 8 9 10 11  13 14 15 16 Next Last Search Articles...